‘फिर्तावाद’ को बाटोमा सरकार | Nagarik News - Nepal Republic Media
३० असार २०७६ १६ मिनेट पाठ
(अर्थात् हाम्रो मार्गको उज्यालो को होला ?
जो आफैंँ अँध्यारोमा छ ! )
सदनमा प्रस्तुत भइसकेका विधेयकसमेत फिर्ता लिनु भनेको सरकार असफल भएको सन्देश हो।
गृह र समाज कल्याण मन्त्रालयले ०७५ जेठ अन्तिम साता सामाजिक नियमनको एउटा युगान्तकारी काम ग¥यो– एनजिओे÷आइएनजिओ, धर्मान्तरण गराउने दातालाई अंकुश लगाउने निर्णय गर्दै परिपत्र ग¥यो। त्यो आफँैमा राष्ट्रहित पक्षमा गम्भीर कदम थियो। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा सञ्चालित ‘डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स’ (डिपिए) बन्द गरायो। गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने उद्देश्यसहित १५ दिने नवीकरण सूचना जारी ग¥यो। सो आदेशपत्रमा नवीकरणका लागि सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। चर्च, गुम्बा र मदरसाका नाममा हुने आध्यात्मिक आवरणका एनजिओे÷आइएनजिओका खेल चानचुने थिएनन्। मिडिया पनि सामेल थियो। तर त्यसलाई थेग्न सकेन, हप्ता दिनमै फिर्ता लियो। तब त सरकारी निर्णयमा क्रमशः फिर्तावाद नै हाबी भयो।
मित्र पराई तथा दुश्मन आफन्त बन्दै जाँदा फिर्तावाद सैद्धान्तिक आधार बन्छ। उम्किने बाटो ‘झुक्किने’ बाहना बन्दै जान्छ। नेतृत्वकर्तासँग कविको हृदय, योद्धाको साहस र दार्शनिकको विवेक अपेक्षा गरिन्छ। फिर्तावाद आधार हुन सक्दैन भने भुक्किने शब्द जिम्मेवारको शब्दकोशमै हुँदैन।
प्रकाशित: ३० असार २०७६ ०८:५५ सोमबार
फिर्तावाद सरकार सैद्धाान्तिक_विवेक